कुन सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदै छन् तिहार ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा यसपालि परिस्थिति अलि सहज भएकाले जनमानसमा उत्साह पलाएको छ ।आमसर्वसाधारणझैं फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरू पनि विशेष तवरले तिहार मनाउने गर्दछन् ।
यसपालिको तिहार कुन सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँदैछन् ? उनीहरूको योजना के छन् त ? यसबारेमा लक्ष्मण सुवेदीले तयार पारेको एक रिपोर्ट :
यसपालि अलि रौनक छ । चाडपर्व आएजस्तो लागेको छ । तर, पनि सावधानी भने अपनाउनुपर्छ । घरमा देउसीभैलो खेल्न आउनेहरूसँग नाचगान गर्न र उनीहरूले दिएको आशिष् लिन बडो आनन्द लाग्छ । मैले आफैँ देउसीभैलो नखेलेको त वर्षाैं भयो । नजिकका साथीहरू मिले भने यसपालि चाहिँ देउसी खेल्न जान मन लागेको छ । हेरौं, माहौल कस्तो बन्छ ।
- १९ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १६:३४ मा प्रकाशित
राप्रपा-एमाले अधिवेशनः चितवन पुगे थापा, भृकुटीमण्डप पुगेनन् ओली